Matte Black 4 Inch Fandroana Fitaovana Fandroana Fandroana
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet fandroana afovoan-tany miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana Matte Black
naoty 4.85 avy tany 5 mifototra amin'ny 20 mpanjifa naoty
Ny efitra fandroana anaty trano fandroana jaky amin'ny fandroana mainty 2 dia manome fiasa sy famolavolana ankehitriny amin'ny 1. Amin'ny alàlan'ny fanomezan-dalana 3 taona. Vidio ny poketra mainty matte mainty 2 an-tanana izao!
2321400B torolàlana fametrahana
WOWOW Vorona Matte Boribory Matte Black
Matte Black Single Single lamba famaohana lamba famaohana
Wall Holder Paper Holder Walled Black
Ny efitra fandroana efitra fandroana mainty 2s 2321400B
Raha maro ny olona misafidy fantsona fandroana volafotsy na chrome, dia afaka manao fanambaràna lamaody goavambe amin'ny fantsom-pandroana mainty matte ianao. Tsy io loko io ihany no manome endrika tsara sy manokana an'ny fandroanao, ny loko mainty matte dia mbola marefo sy mahazatra ihany koa. Ny mainty matte tsy kisendrasendra dia nanjary loko mahazatra ankehitriny raha ny famolavolana ny fandroana. Matte black dia fironana izay tsy hitsoka tampoka mihitsy. Ny famaranana matte mainty amin'ny fantsona fandroana fandroana dia afaka manome sentona maoderina ho an'ny trano fandroana.
Mety tsy hatao ambanin-javatra ny zava-misy fa ny faucet ao amin'ny trano fidiovana dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny fandroana rehetra momba ny fomba. Na dia kely aza ny faucet ao amin'ny trano fidiovana, dia mifantoka amin'ny fantsom-pandroana fandroana ny olona satria ny fahitany dia manintona ho azy ireo. Noho izany ny faucet ao amin'ny fandroana dia afaka manamboatra na mamaky trano fandroana. Ny faucet ao amin'ny fandroana dia manana fahaizana manandratra fandroana. Ny efitrano fandroana tsotra na minimalistic dia afaka mahazo fisondrotana be miaraka amin'ny faucets fandroana fandroana. Ny famolavolana endrika Retro kanto amin'ity faucet fandroana WOWOW ity dia mahatonga ny fandroanao ho lamaody indray mandeha. Ny faucet fandroana matte black 2 tantana WOWOW dia iray amin'ireo faucet fandroana fandroana izay afaka manova ny haingon-trano fidianao.
Maty fandroana mainty Matte misy tànana 2
Ny style dia zavatra iray, fa ny fiasa mety ho zava-dehibe kokoa aza. Amin'ny base isan'andro dia ampiasainao matetika ny trano fidianao ary tianao ny manasa anao amin'ny fomba manohana ny fanaonao isan'andro. Manisa izay tsy isalasalana fa ho toy ny fandroana sy fandroana fandroana. Saingy mety hampiasa ny fandroana ny fandroana trano fidiovana mihoatra noho ny endrika hafa amin'ny fandroana ianao. Izany no antony tokony handinihanao bebe kokoa an'io lafiny amin'ny efitrano fidianao io. Ankoatry ny fandroana trano fidiovana mety, ny faucet ao amin'ny fandroana dia mametraka ny fiasa rehetra ilainao.
Ny faucet fandroana matte mainty 2 tantana WOWOW dia manome antoka rano lehibe traikefa. Ity faucet fandroana mainty matte mainty ity dia manana tahony 4. Miaraka amin'ireo tahony ireo dia azonao atao ny manitsy ny mari-pana amin'ny rano sy ny hafainganam-pandeha tsy misy ilana azy amin'izay ilainao. Ny spout arc ambony dia manome anao toerana malalaka eo anelanelan'ny spout sy ny fandroana ao an-trano fidianao mba hanasana tsara ny tananao na hanasana ny tavanao. Ny halavirana dia 2 santimetatra ary manome toerana malalaka. Vokatr'izany dia tsy mila miady amin'ny toerana voafetra toy ny fantsona fandroana ambany ianao.
Ambonin'izany rehetra izany, ny noza azo ovaina amin'ny faucet matte mainty 2 tahony WOWOW dia manome fihodinana 360 degre ho an'ny fampiasana mety. Ny fantsom-pandroana fandroana matte mainty 2 dia misy fantsom-bary fananganana amin'ny loko mainty mitovy mba hamoronana firaisan-kina iray amin'ny fandroana amin'ny fandroana anao. Mora ny manokatra sy manidy an'ity fivorian-drano ity miaraka amin'ny tantana miharo ao ambadiky ity faucet fandroana ity.
Akanjo fandroana kilasy voalohany amin'ny fanatanjahan-tena mainty 2
Ankoatry ny endriny ankehitriny sy feno fahasahiana, WOWOW dia fantatra amin'ny fenitra avo lenta. Satria manosika ireo fenitra kalitao ireo avy eo amin'ny tabilao fanaovana sary hatrany amin'ny ozinina maoderina maoderina azy ireo, ny antsipiriany madinidinika ao amin'ny faucet fandroana fandroana dia nohavaozina fatratra. Manome anao fantsom-pandroana fandroana avo lenta izay hanompo tsara ny tanjony ary manome fiaretana maharitra.
Ny tongotra maharitra amin'ny fantsom-batana WOWOW amin'ny paosy mainty 2 dia vita amin'ny fitaovana varahina matanjaka satria io dia manome antoka ny fahombiazan'ny fahombiazana sy ny faharetana maharitra indrindra. Ary ny fananganana dia vita amin'ny varahina mafy ary vitaina amin'ny firaka zinc. Tsy mila miahiahy momba ny olana amin'ny fahasimbana ianao noho ireo fitaovana ireo. Ankoatr'izay, ity faucet ao amin'ny fandroana ity dia tsy mitarika firy hiarovana ny ankohonanao hatramin'ny farany. Tsapanao eo noho eo ny fahasamihafana an'io toetra io rehefa mitazona azy ianao. Ity paozy fandroana mainty matte mainty 2 ity dia tsy mahazaka loko ihany koa. Noho izany dia mora ny mitazona. Izay no azonao rehefa mividy fantsona fandroana fandroana avo lenta ianao.
Trano fandroana ara-toekarena palitao mainty 2 tànana
Ny kapila vita amin'ny ceramic premium ao anatin'ity faucet fandroana mpamorona endrika mainty matte ity dia mampandeha tsara ny rano ary tsy mitete. Ny spout amin'ity faucet fandroana ity dia misy aerator ABS. Amin'ity lafiny vaovao ity dia afaka mitsitsy amin'ny fanjifanao rano ianao ary manampy amin'ny fitehirizana ny rano. Ny valizy voamarina NSF dia mihodina milamina hanomezana anao fiononana lehibe. Ny cartridge avo lenta dia notsapaina tamin'ny tsingerin'ny rano 500,000, ary mbola nahavita tsara ihany. Ary izany amin'ny vidiny mirary nefa!
Satria ny fizotry ny famokarana WOWOW dia avo lenta sy mandeha ho azy, WOWOW dia afaka manolotra ity fantsom-baravarana fandroana matte mainty kalitao 2 ity amin'ny vidiny mirary fatratra. Miaraka amin'ny fividianana fitaovana mahomby sy mahomby ary fampiasana fitaovana, WOWOW dia mitahiry vola be amin'ny famokarana. Ary na dia tsy very aza ny tanjona voalohany amin'ny famokarana vokatra avo lenta tsy ho hitan'ny masontsika. WOWOW dia manome antoka fa tsy hahita faucet fandroana mitovy kalitao amin'ny vidiny ambany noho ny hatolotray izahay.
Mora mametraka sy mora mitazona
Ity fantsom-pandroana mainty matte mainty ity dia misy fehin-tànana miisa 2 mora apetraka irery fa tsy misy matihanina. Amin'izany no ahafahanao mitahiry bebe kokoa amin'ny alàlan'ity fametrahana ity faucet matte black 2 ho an'ny fandroana ity. Ny faucet amin'ny fandroana 4 mirefy dia mety amin'ny havoana misy lavaka 3. Ny fantsom-pandroana fandroana matte black 2 dia miaraka amina kojakoja ilaina amina fametahana sombin-tsakafo, ao anatin'izany ny fantson-drano, ny fantson'ny tehina ary ny takelaka fametahana mora apetraka.
Miaraka amin'ny faucet fandroana matte mainty 2 tantanana WOWOW dia ho azonao antoka ny fantsom-pandroana fandroana mihoatra ny fenitra indostrialy rehetra. Ho afaka mitazona mora foana ity faucet amin'ny fandroana ity ianao, raha afaka manala ny rano sisa tavela amin'ny fikasihan'ny rantsan-tànanao. Satria mora diovina ity faucet ao amin'ny fandroana ity dia azonao atao ny mampiasa io faucet io mandritra ny fotoana maharitra, manome antoka ny fari-drano avo lenta. WOW tsy amin'ny tsy misy dia manome fe-potoana fiantohana mandritra ny 3 taona mba hiantohana ny fahombiazan'ny fantson-tsarimihetsika fandroana matte black 2.
Ny tombony azo avy amin'ny efitrano fandroana matte mainty 2 dia mihazona amin'ny fomba fohy:
 Famoronana mainty matte miavaka
 faucet avo be dia be hividianana habaka maro
 Maimbo sy manondraka maimaim-poana
 fampisehoana lehibe
SKU: 2321400B Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: fivoriambe, roa mitazona, sambo milentika faucet
6 X 2.2 X 7.5 santimetatra
Asandrato ny rantsan'ny Rod
B M *** March 26, 2019
TIA tanteraka io faucet io. Tsy azonao resena ity vidiny ity ary mahafinaritra ny kalitao.
Paompy tsara tarehy. Ampirisiho mafy izy ireo. Sarany lehibe
G *** ny2020-03-25
Tena faly amin'ity vokatra ity- vita tsara sy mora apetraka. Mandritra ny alina ny torolàlana, ny hany ilainao (ny minus wrenches) dia tonga ao anaty fonosana, ary toa tsara ny vokatra farany! Tiako ny fomba firesaky ny spout!
*** E D2020-03-26
Toa tsara, miasa tsara. Hiverina indray.
L f ***2020-03-28
Mahafinaritra tokoa ny mametraka azy. Tiavo fa mivezivezy ny faucent
Nanafatra an'ity aho ary nahazo ity fantsom-pandroana mainty ity hariva io izay napetraka tao anatin'ny antsasak'adiny fanavaozana tena tsara. Misaotra anao.
tsara tarehy sy mpamatsy vidin'ny vidiny nilaza fa tsara ny paompy sy kalitao tsara amin'ny vidiny
J *** f2020-04-01
Nilaza ny plumberako fa mora apetraka ity faucet roa ity. Tena tsara ny tsindry rano, indrindra ny rano mafana. Tiako ireo spout swivels ary afaka mameno zavatra ao anaty fandroana aho izao ary tsy mila mankany amin'ny faucet an-dakozia avo lenta.
Tiako ity fantsom-pandroana fandroana roa ity, toa milay ary mora ny mametraka azy
Ny isa azo itokisana sy ny endrika maoderina an'ity faucet ity. Mety tsara amin'ny trano fandroana an-trano
Fanavaozana tsara ny trano fandroana. Famolavolana malama, napetraka haingana sy mora.
Tamin'ny voalohany dia somary sahirana aho (noho ny tsy fahampian'ny traikefa). Nanampy ahy ny fantsom-bolanako. Manaiky aho fa mahagaga ny vidiny, azo antoka fa toa lafo izany ary tsara ny kalitaony. Tena soso-kevitra hividy! !
Izaho dia nanana mpiambina nametraka ny ahy, saingy nilaza izy fa mora ny mametraka azy ireo. Nanova ny fandroakoako avy hatrany ilay endrika maodely tadiaviko.
*** N y2020-04-18
Prefet - fonosana tsara ity efitrano fandroana ity ary avo lenta
Miasa tsara, Faucet endrika maoderina tokoa
Tiavo ny fijery sy ny fampisehoana an'ity faucet ity. Tsara ny renirano! Tiako fa azo esorina amin'ny sisiny ny faucet. Tena hividy indray!
E *** O2020-04-26
Ny fanavaozana ny fijerin'ny filentehan'ny antitra sy ny haavony lava kokoa dia manome toerana bebe kokoa handehanan'ny rano. Sarobidy tokoa amin'ny vola!
E *** O2020-04-28
Mora apetraka ity faucet ity. Ny endrika ivelany koa dia tsara tarehy. Affordable.